Askar ka tirsan booliska oo loo xiray dil isbitaal loogu geystay qof bukaan ah – Star FM Kenya
Askar ka tirsan booliska oo loo xiray dil isbitaal loogu geystay qof bukaan ah
August 29, 2016 starfmke 0 Comment
2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii lagu tuhmay in ay ku lug leeyihiin dil dhawaan qof bukaan ah loogu geystay isbitaal ku yaalla magaalada Mwingi ee maamul goboleedka Kitui.
Fredrick Musyimi, oo 27 sano jir ahaa kana mid ahaa dadka ganacsatada ee waratada loo yaqaanno ayaa khamiistii hore lagu dilay sariirta Isbitaalka xili laga daweynayay dhaawac kasoo gaaray toogasho loo geystay iyadoo dhac loo geysanayay gaari uu saarnaa.
Labada askari ee falkaan lala xiriirinayo ee hadda la xiray ayaa ka howli gali jiray xafiiska waaxda dambi baarista ee magaalada Kitui.
Taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Joseph Boinnet ayaa sheegay in ay socdaan baaritaanno qota dheer oo lagu sameynayo dhacdadaasi iyo sida ay askarta ugu lug leeyihiin.
Koox dambi baareyaal ah oo ka kala socda Nairobi, Machakos iyo Embu ayaa loo diray goobta uu dilkaasi ka dhacay, si ay baaritaanno wada jir ah u sameeyaan.
Mr Boinnet ayaa sheegay in labada askariba ay dhawaan kasoo hor muuqan doonaan maxkamadda, si ay u wajahaan dacwad ku saabsan dilka ninkaas dhalinyarada ahaa.
Tallaabadaan ayaa timid kadib markii qoyska uu kasoo jeedo ninka la dilay ay dowladda ka codsadeen in ay u sameyso caddaalad, isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay dhimashada wiilkooda.
← Dowladda iyo Fallaagada dalka Colombia oo heshiis kala saxiixday
3 askari oo loo xiray iney ku lug leeyihiin maqnaanshaha nin dhaqtar ah →
Kenya oo mareykanka ka heshay deeq lacageed oo dhan 1.7 bilyan oo shilin oo lagu keydinayo qalabka caafimadka.
September 18, 2016 starfmke 0
Gavanarada dalka oo gudiga IEBC u soo jeediyay in oo la tacaalo falalka macluumaadka looga xado
April 11, 2017 starfmke 0
Koox u ololeynaysa in doorashada guud la qabto bisha Disembar ee sanadkan
March 31, 2017 starfmke 0